Iindaba -Ulwazi lokwahlulahlula umpheki
Ekhitshini, ukupheka induction yenye yezinto zombane eziqheleke kakhulu.Kodwa kulwahlulo lwe-induction cooker wena ucacile nganye nganye? jonga ngononophelo!
Ngokutsho kwamandla okupheka, i-cooker ye-induction kunye ne-cooker ye-induction.
Ngokwamandla okupheka okupheka kunokwahlulwa kubapheki bokungenisa amakhaya kunye nabapheki bokungenisa ezentengiso.
Umbane osebenzayo wokupheka omnye yi-120V-280V, kwaye eyona ixhaphakileyo yi-1900W-2200W, esetyenziswa kakhulu ekuphekeni kosapho.Yaphuhliswa kwangoko kwaye isetyenziswe ngokubanzi kwilizwe lethu.
Umbane osebenzayo wesithando esiphindwe kabini sentloko ikwayi-120V-280V. Okwangoku, kukho iflethi enye kunye ne-concave kunye neeflethi ezimbini kwimarike yasekhaya. Amandla okupheka angabodwa angama-2100W, kwaye umpheki ophindwe kabini osebenza ngaxeshanye awukho ngaphezulu kwe-3500W.
Iziganeko ezifanelekileyo: nayiphi na indawo apho kusetyenziswa khona izitovu zemveli, njengezibhedlele, iifektri kunye nemigodi, iihotele, iivenkile zokutyela, iikholeji neeyunivesithi, amaziko, njl. ngaphandle konikezelo lwepetroli okanye ukusetyenziswa kwamafutha okuthintelweyo, njengaphantsi komhlaba, uloliwe, izithuthi, iinqanawa, ukuhamba ngenqwelomoya kunye nolunye uphuhliso lwase China, ngakumbi ukuphuculwa ngokukhawuleza kwamandla ombane, esi siphekepheke sokurhweba sinegunya eliphezulu siza kusetyenziswa ngokubanzi.
Umbane omnye igesi
Umbane omnye wegesi yindibaniselwano yokupheka yokungenisa kunye neemveliso zesitovu segesi, intloko yesithando somlilo inokusebenzisa igesi yesiqhelo, enye intloko yesithando isebenzisa umpheki wokungenisa, amandla ngokubanzi i-2100W, yiminyaka emibini imveliso evelayo.